Ku saabsan 211 - Aloha United Way 2-1-1
Ka Raadi Online
Waa maxay 211?
Kudar Wakaalada Cusub
Ku darso Barnaamij Cusub
Wakaalada /Barnaamijka Cusbooneysii
Adeegga Aloha United Way's 211 waa macluumaadka kaliya ee dhamaystiran ee gobolka oo dhan iyo khadka caawinta ee gudbinta. Khabiiradayada 211 waxa si gaar ah loogu tababbaray inay kaa caawiyaan sidii aad u heli lahayd cunto, hoy, kaalmo dhaqaale, daryeelka ilmaha, taageerada waalidnimada, daryeelka kupuna, adeegyada naafada, iyo adeegyada caafimaadka ee la xidhiidha COVID-19 iyo tallaallada.
Sideen ula xiriiri karaa 2-1-1? Caawimada ayaa laga heli karaa gobolka oo dhan iyadoo la adeegsanayo hababkan:
In ka badan 4000 oo agab
Fadlan ku dar zip code
7 subaxnimo - 10 galabnimo, 7 maalmood todobaadkii
Oggolow hal maalin shaqo
Waxaan joognaa marka ay xaalad degdeg ahi dhacaan.
211 waa shuraako ku ah qorshaha maamulka degdega ah ee gobolka, iyo sidoo kale qorshayaasha magaalada iyo degmada ee jasiiradaha oo dhan.
211 wuxuu awood u leeyahay inuu abaabulo gobolka oo dhan xilliyada masiibada. 211 waa xubin ka mid ah VOAD (Ururada Iskaa wax u qabso ee Firfircoon Masiibada) waxayna awoodaan inay bixiyaan tixraacyo marka ay jirto dhibaato ama masiibo.
211 waxay yaraynaysaa cadaadiska nidaamka 9-1-1 ee wicitaanada aan degdega ahayn.
211 waa barta dhexe ee lagala xiriiro ka jawaabayaasha degdega ah si ay ula wadaagaan macluumaadka ugu dambeeyay ee meelaha hoyga, daadgureynta, wadooyinka, xiritaanka wadooyinka iyo la-talinta caafimaadka bulshada.
211 waxay ahayd kheyraad muhiim ah oo lagu faafiyo macluumaadka iyo tixraacyada la xiriira faafitaanka COVID-19, tallaallada, daadadka, duufaannada, dillaacyada iyo xaaladaha degdegga ah ee kale.
211 "211 waxay bixisaa gacan-kordhin iyo shabakad badbaado iyadoo ahaanshaha kheyraad midaysan oo isku xira kuwa raadinaya baahiyaha bulshada. La'aanteed 211, kuwa ugu baahida badan waxay tagi karaan adeegyo la'aan. waxaan gacan ka geysaneynaa in aan isu naxariisano qaar ka mid ah waqtiyadeena ugu adag" Nicholas R. Winfrey, Sarkaalka Sare ee Xirfadlaha, Maui United Way.
Sideen Ugu Dari Karaa Kheyraad ama Liiska Xogta?
Kaydka 211 waxa ka buuxa noocyo kala duwan ama barnaamijyo ah oo haddii aad haysato mid aad ku darto, fadlan isticmaal boggayaga bixiyaha kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku darto kheyraad cusub, cusbooneysiiso liis hadda jira iyo wax ka badan. Adeeggu waa gobolka oo dhan, sidaa darteed dhammaan jasiiradaha waxaa lagu soo bandhigaa kaydka xogta iyo xogta.
Kudar wakaalad cusub
Ku dar barnaamij cusub
La cusboonaysiiyay wakaalad ama barnaamij.
Sr. Agaasimaha, 211 Jawaabta Bulshada
Barnaamijka Aloha United Way.
Booqo Aloha United Way
© 2022 Aloha United Way 2-1-1. Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Waxaa xoojiyay Goobta Savvy.